App/Game – Page 8 – Myanmar Mobile App
Windows, macOS နဲ့ Linux မှာ Windows 95 ကို app အနေနဲ့ အခမဲ့ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်
Zawgyi Version ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘ၀ကို PC တွေက မလွှမ်းမိုးသေးတဲ့အချိန်တစ်ခုကို ပြန်ရောက်သွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီ app လေးနဲ့ လုပ်ဆောင်လို့ရပါတယ်။ ကြာသပတေးနေ့တုန်းက Slack developer Alex Rieseberg က GitHub ပေါ်မှာ Windows 95 experience ခံစားမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်စေဖို့အတွက် app တစ်ခုအနေနဲ့ ထုတ်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကိုတော့ Windows, macOS နဲ့ Linux မှာ အသုံးပြုလို့ရစေမှာပါ။ အခမဲ့လည်း ဒေါင်းလုတ်ဆွဲလို့ရပါတယ်။ မြင်မြင်သမျှအားလုံးက သင့်ကို Windows 95 အကြောင်း သတိရသွားစေမှာပါ။ Windows 95 စက်တွေမှာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ standard Start menu program တွေကို ပြန်လည်အမှတ်ရစေမှာပါ။ နောက်ပြီး ဂိမ်းလေးတွေဖြစ်တဲ့ FreeCell […]
ပီစီအတွက် texting feature လုပ်နေတဲ့ Skype
Zawgyi Version အခုဆိုရင်တော့ အတွင်းလူတွေစမ်းသပ်နေပါပြီ။ Skype က Android အတွက် “SMS Connect” လို့ခေါ်တဲ့ feature လေးတစ်ခုကို Insider တွေစမ်းသပ်ဖို့အတွက် ထုတ်ပေးထားပါတယ်။ Skype Preview’s settings ရဲ့နောက်ဆုံးဗားရှင်းမှာ Skype ကို အသုံးပြုပြီးတော့ Mac or Windows PC မှာ စာပို့၊လက်ခံနိုင်တယ်ဆိုတာကို Windows Blog Italia ကတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က သင့်ဖုန်းကို Skype app လေးကနေ မက်ဆေ့ခ်ျပို့တဲ့အခါ ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ Skype app ကနေ တန်းပြီးတော့ စာပြန်နိုင်မှာပါ။ သင်က Insider တစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ Android ပေါ်မှာရှိတဲ့ Skype Preview ကနေ အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ ဖွင့်လို့မရလောက်သေးဘူးနဲ့ […]
Posted on August 19, 2018 Author Aung Phyo Oo (Myanmar Mobile App)	Comment(0)
App/Game Smartphone Trending
Confidential Mode ပါလာတဲ့ Gmail (Android)
Google က အရေးကြီးတဲ့ သတင်းအချက်အလက်များကို အခြားလူများက ခိုးယူခြင်း မပြုနိုင်အောင် အီးမေး ပို့ပြီးနောက် အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုအတွင်းမှာ အလိုအလျှောက် ဖျက်ဆီးပေးတဲ့ Confidential Mode ကို မေလမှာ ဒတ်စတော့ရဲ့ Gmail မှာ ထည့်သွင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ အဲဒီ လုပ်ဆောင်ချက်ကို Gmail( Android ) မှာ ထည့်သွင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ iOS မှာ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖြန့်ချီပေးမယ့် အချိန်ကို ဂူဂယ်လ်က မပြောကြားသေးပါဘူး။ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကို အန်းဒရွိုက်မှာ အသုံးပြုဖို့အတွက် Gmail App ကို Update လုပ်စရာ မလိုပါဘူး။ သဘောကတော့ Over The Air ကနေ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကို ထည့်သွင်းပေးတာ ဖြစ်ပြီး အင်တာနက် ဖွင့်ထားတာနဲ့ […]
Posted on August 18, 2018 Author Ko Nyi	Comment(0)
Posted on August 16, 2018 Author Aung Phyo Oo (Myanmar Mobile App)	Comment(0)
Android Messages မှာ dark mode နဲ့ Material Design အသစ် အသုံးပြုနိုင်ပြီ
Zawgyi Version Material Design ကိုပြန်ပြင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ပြီးခဲ့တဲ့ဂျူလိုင်ကတည်းက သိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ Google ရဲ့ app တွေဖြစ်တဲ့ stock Contacts app ကလည်း အဖြူ၊ ထောင့်လုံးလေးတွေ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ Android Messages ကလည်း အတော်လေးလှပစွာ ပြောင်းလဲလာတာကို တွေ့မြင်ရမှာပါ။ Android Police ရဲ့ သတိထားမိချက်အရ Google ဟာ Android Messages ရဲ့ ဗားရှင်းအသစ်ကို ထုတ်ပေးလိုက်ပါပြီ။ Material Design ကို ပြင်ဆင်ထားတဲ့အပြင် dark mode ကိုလည်း ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ Android Messages ကို ပြင်ဆင်ထားတဲ့အခါမှာ font အသစ်ပါဝင်လာပြီးတော့ အပြာရောင်နောက်ခံလေးကို default ထားပေးမှာပါ။ “Start […]
App/Game Smartphone Social Trending
Fortnite ဂိမ်းကို ဘာကြောင့် တခြား Android ဖုန်းတွေမှာ ဆော့လိုမရတာလဲ ?
Fortnite ဂိမ်းကို Samsung နဲ့ အခြားAndroid ဖုန်းတွေမှာ ဘီတာအနေနဲ့ ဆော့ကစားလို့ရပြီး အခြားဖုန်းတွေမှာ support မလုပ်တာလည်းဆိုရင် သူ့မှာသတ်မှတ်ချက်တွေ ရှိနေပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ OS ပိုင်းမှာဆိုရင် 64 bit Android, 5.0 (သို့) သူ့ထက်အမြင့်လိုပါတယ်၊ RAM ပိုင်းမှာတော့ 3GB (သို့) သူ့ထက်အမြင့်နဲ့ GPU ပိုင်းမှာဆိုရင် Adreno 530 (သို့) higher, Mali-G71 MP20, Mali-G72 MP12 (သို့) higher လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲ့လိုမဟုတ်ပဲ အခမဲ့ပေးထားတဲ့ လင့်တွေကဒေါင်းပြီး ဖုန်းမှာထည့်သွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီဖုန်းမှာ GPU ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်ရှိတယ်ဆိုပြီး Device Note Supported ဆိုတဲ့အသိပေးချက် ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ EPIC […]
Posted on August 11, 2018 Author jacksonsoemoe	Comment(0)
Gmail app ထဲက conversation view ကို ပိတ်လို့ရတော့မည်
Zawgyi Version Gmail က ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေခဲ့တဲ့ပုံစံတွေကို ပြောင်းလဲပစ်လိုက်ပါတယ်။ 25MB inbox ကို စီမံရခြင်းအဆုံးသတ်သွားသလို conversation view ကလည်း ကြည့်ရတာအဆင်ပြေလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အချို့လူတွေကတော့ conversation view ကို မသုံးချင်ကြပါဘူး။ ဒီတော့ Gmail က Android မှာ ပိတ်လို့ရအောင် လုပ်ဆောင်ပေးတော့မှာပါ။ Google က ၂၀၁၀ခုနှစ်တည်းက စတင်ပြီးတော့ Gmail ရဲ့ web version မှာ conversation view ကိုပိတ်လို့ရအောင် လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ mobile app မှာတော့ မရနိုင်သေးပါဘူး။ conversation view ကိုပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ IMAP, exchange, or POP3 ကို အသုံးပြုရမှာပါ။ general settings […]
Posted on August 8, 2018 Author Aung Phyo Oo (Myanmar Mobile App)	Comment(0)
Facebook ၀န်ထမ်းတွေ စတင်သုံးစွဲလို့ရနေပြီဖြစ်တဲ့ Facebook Dating
Zawgyi Version အဒေါ်အပျိုကြီးတွေက သင်ရည်းစားထားတာ သိချင်မှသိတော့မှာပါ။ Facebook ကတော့ ရည်းစားရှာတဲ့ဝန်ဆောင်မှုလေးကို စတင်စမ်းသပ်နေပါပြီ။ Twitter သုံးစွဲသူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ @wongmjane ကတော့ အဲဒီဝန်ဆောင်မှုလေးအတွက် sign-up screen လေး တွေ့မြင်ရကြောင်းရေးသားထားတဲ့ tweet လေးကို သောကြာနေ့က တင်ခဲ့ပါတယ်။ Facebook က Facebook Dating လေးကို စတင်စမ်းသပ်နေပါပြီ။ ကျွန်မကတော့ signup screen ကို မသွားနိုင်သေးပါဘူး။ သူတို့ဟာ ၀န်ထမ်းမဟုတ်တဲ့သူတွေစမ်းလို့မရအောင်လုပ်ထားပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ထွက်မှမထွက်သေးတာလို့ ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Facebook is internally testing Facebook Dating. I can’t go past the signup screen because they are not […]
Posted on August 4, 2018 Author Aung Phyo Oo (Myanmar Mobile App)	Comment(0)
Facebook က ရည်းစားရှာတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုကို စမ်းသပ်နေ
Facebook က မေလအစောပိုင်းမှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ F8 Developer Conference မှာ ရည်စားရှာဖွေတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကို သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်မှာ ထည့်သွင်းပေးဖို့ ဖန်တီးနေတယ်လို့ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ အမေရိကန်မှ Facebook ရဲ့ ၀န်ထမ်းများဟာ ဌာနတွင်းမှာ အဲဒီ လုပ်ဆောင်ချက်ကို စမ်းသပ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ App သုတေသီ တစ်ဦး ဖြစ်သူ Jane Manchun Wong က Facebook ရဲ့ Source Code များထဲမှာ အဲဒီလုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကုဒ်များကို တွေ့ရတယ်လို့ တွစ်တာမှာ ပို့စ်တင်ထားပါတယ်။ Facebook မှာ သီးခြား ပရိုဖိုင်တစ်ခုကို ဖန်တီး၍ ကြင်ဖက်ရှာရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သင့်ရဲ့ Privacy ကိုလည်း စိတ်ပူစရာ […]
Posted on August 4, 2018 Author Ko Nyi	Comment(0)
LG အနေနဲ့ ဒီနေ့မှာတော့ G7 ThinQ ဖုန်းတွေအတွက် update အသစ်တခုကို ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အသစ်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ update ဟာကင်မရာပိုင်းဆိုင်ရာ အတွက်အဓိကကျတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပြီး 4K video တွေကို 60fps နှုန်းနဲ့ ရိုက်ကူးနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ update အသစ်ကို ကိုရီးယားနိုင်ငံအတွင်းမှာသာ ရသေးပြီး အခြားနိုင်ငံတွေမှာ ရရှိဖို့အတွက် စောင့်ရအုံးမှာပါ။ ကင်မရာရဲ့ Settings ထဲကိုဝင်ရောက်ပြီး ‘Video resolution’ အတွက်သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ စာရင်းကို ဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ UHD 16:9 (60fps) 3840×2160 ဆိုပြီးထပ်မံထည့်ပေးလိုက်တာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ LG အနေနဲ့ အစောပိုင်းတုန်းက G7 ThinQ မှာ 4K ဗီဒီတွေကို ရိုက်ကူးတဲ့အခါ 30fps နှုန်းသာကန့်သတ်ပေးထားပါတယ်။ အခုတော့ […]
Posted on June 27, 2018 Author jacksonsoemoe	Comment(0)